I-Yale School Management Programme kunye ne-Admissions
Kubafundi nabazali KwiSikolo soShishino
Yale School of Management, eyaziwayo njengeYale SOM, inxalenye yeYunivesithi yaseYale, eyunivesithi yophando yangasese e-New Haven, Connecticut. Nangona iYale University yinye yeziko elidala kakhulu lemfundo ephakamileyo eUnited States, iSikolo soLawulo asizange sisekwe-1970 ukuya kwaye asizange siqalise ukunikezela inkqubo ye-MBA kude kube ngo-1999.
Nangona i-Yale School of Management ayizange ijikeleze ngokukhawuleza nje ngokuba ezinye izikolo zoshishino kunye nolawulo, ziyaziwa kwaye ziyaziwa ngokuba yenye yezona zikolo zoshishino ezilungileyo kakhulu kwihlabathi.
Isikolo soLawulo lweYale sikolo sesinye sezikolo zorhwebo ze-Ivy League e-United States. Kwakhona enye ye- M7 , inethiwekhi engacwangciswanga yezikolo ze-elite zorhwebo.
Yale School of Programme Management
Isikolo se-Yale soLawulo sinikeza uluhlu olubanzi lwemfundo yezoshishino kubafundi abakwizinga lokuphumelela. Iiprogram zemfundo zibandakanya inkqubo epheleleyo ye-MBA, i-MBA ye-Executives program, i-Master of Advanced Management program, inkqubo ye-PhD kunye neenkqubo ezidibeneyo. Iinkqubo ezingekho phantsi kwee-grade ziquka iinkqubo zeMfundo eziPhezulu.
Inkqubo ye-MBA epheleleyo
Iprogram ye-MBA yexesha elipheleleyo kwi-Yale School of Management inekharityhulam edibeneyo engafundisi kuphela ulawulo olubalulekileyo, kodwa kunye nemibono enkulu yokukunceda uqonde imibutho kunye nezoshishino ngokupheleleyo. Uninzi lwekharityhulam luxhomekeke kwiimeko eziluhlaza, ezikunikezela ngolwazi oluqinileyo ukukunceda ufunde indlela yokwenza izigqibo ezinzima kwiimeko zoshishino zangempela.
Abafundi abafuna ukufaka isicelo kwisikolo se-MBA esigcwele i-Yale School of Management kufuneka bafake isicelo se-intanethi phakathi kukaJulayi no-Ephreli. Isikolo soLawulo lwe-Yale sinezicelo ezijikelezayo, oko kuthetha ukuba kukho ixesha elide lokufaka izicelo. Ukufaka isicelo, udinga imibhalo evela kuzo zonke iikholeji oya kuzo, iileta ezimbini zokuncomo, kunye ne-GMAT esemthethweni okanye izikolo eziphezulu.
Kumele ungenise incoko kwaye uphendule imibuzo emininzi yesicelo ukwenzela ukuba ikomidi lokumkelwa likwazi ukufunda ngakumbi malunga nawe kunye nendlela othanda ngayo.
MBA yeeNkqubo zoLawulo
Inkqubo ye-MBA ye-Executives kwi-Yale School of Management yiprogram yeenyanga ezingama-22 zabaqeqeshi abasebenza. Iiklasi ziqhutywa ngeempela-veki (ngoLwesihlanu kunye neMigqibelo) kwi-Yale campus. Phantse i-75% yekharityhulam inikezelwe kwimfundo yezemfundo jikelele; Ama-25% aseleyo azinikezelwe kwingingqi ekhethiweyo yomfundi. Njengenkqubo ye-MBA epheleleyo kwiSikolo soLawulo lwe-Yale, i-MBA ye-Executives program iqulethe ikharityhulam edibeneyo kwaye ixhomekeka kakhulu kwiimeko eziluhlaza ukufundisa imigaqo-shishini yabafundi.
Le nkqubo yenzelwe abaqeqeshi bokusebenza, ngoko i-Yale School of Management ifuna ukuba ugcine umsebenzi xa ubhalise kwi-MBA yeeNkqubo zoLawulo. Ukufaka isicelo kule nkqubo, kufuneka uhambise i-GMAT, IG okanye i-Assessment Executive (EA); kwakhona; iingcebiso ezimbini zeengcali kunye nezincoko ezimbini. Akudingeki ukuba uthumele imibhalo esemthethweni ukufaka isicelo, kodwa kuya kufuneka uhambise imibhalo xa ubhalisa.
Iiprogram zokudibanisa zeSikolo soLawulo lwe-Yale zinika abafundi ithuba lokuba bafumane i-MBA degree kunye ne-degree ukusuka kwesinye isikolo saseYale.
Izinketho zokudibanisa ezidibeneyo ziquka:
MBA / JD kunye neYale Law School
MBA / MEM okanye i-MF ne-Yale School of Forestry & Environmental Studies
MBA / MA kwiMicimbi yeSizwe kunye neSixeko saseJackson yeMicimbi yeSizwe
MBA / MD neYale School of Medicine
MBA / MPH kunye neSikolo se-Yale seMpilo kaRhulumente
MBA / MARCH ngeYale School of Architecture
MBA / MFA ngeYale School of Drama
MBA / MDIV okanye iMAR neYale Divinity School
MBA / PhD kunye neSikolo se-Yale Graduate School of Arts and Sciences
Ezinye iiprogram zeZibambisene eziManyeneyo zineminyaka emibili, iminyaka emithathu, kunye neminyaka emine yokukhetha. Imfuno zeKharityhulam kunye nezicelo ziyahluka ngohlelo. Ukutyelela kwiwebhusayithi ye-Yale School Management ukufunda ngakumbi.
I-Master of Advanced Management Programme
I-Master of Advanced Management (MAM) kwinkqubo ye-Yale School of Management yiprogram ye-year-year specially for the graduates of Global Network of Advanced Management members.
Le nkqubo ihlose ukubonelela ngemfundo yophambili ephakamileyo kubafundi abaye bafumana i-MBA degree. Phantse i-20% yekharityhulam ye-MAM iqukethe izifundo eziphambili, ngelixa ezinye i-80% yenkqubo inikezelwe kwii-electives.
Ukufaka isicelo kwinkqubo ye-MAM kwi-Yale School of Management, udinga i-MBA okanye i-degree elinganayo kwiNethiwekhi ye-Global Network ye-Advanced Management ilungu lelungu. Kuya kufuneka kwakhona ukuba uthumele isiluleko esisodwa seengcali, ukubhalwa ngokusemthethweni kunye nokulinganisa okulinganiselweyo kwiimvavanyo ezilandelayo: GMAT, GRE, PAEP, i-MBA yoVavanyo loVavanyo okanye iGAT.
Inkqubo ye-PhD e-Yale School of Management inikeza imfundo ebalulekileyo kunye nolawulo lwabafundi abafuna umsebenzi kwiziko lemfundo. Abafundi bathabatha iikhosi ezili-14 kwiminyaka emibili yokuqala kwaye basebenze kunye noMlawuli weeSifundo seMatriki kunye namalungu e-faculty ukuba bakhethe iikhosi ezongezelelweyo zokuthatha ixesha labo elisele kule nkqubo. Iindawo zokugxila kwinkqubo ye-PhD zibandakanya imibutho kunye nokulawula, ukubalwa kwezimali, iimali, imisebenzi kunye nokuthengiswa kwamanani. Abafundi abakwazi ukugcina iimfuno zeprogram bafumana uncedo olupheleleyo lwezemali.
Izicelo zeProgram ye-PhD kwi-Yale School of Management zamukelwa kanye ngonyaka. Umhla wokugqibela wokufaka isicelo usekuqaleni kukaJanuwari wonyaka ofuna ukuya kuwo. Ukufaka isicelo, kufuneka uhambise iziphakamiso ezithathu zezifundo, izikolo zeGr okanye zeGGAT kunye neempendulo ezisemthethweni. Amaphepha ashicilelweyo kunye nesampula zokubhala ayimfuneko, kodwa angeniswa ukuxhasa ezinye izinto zokwenza isicelo.
IiNkqubo zeMfundo eziLawulayo
Iiprogram zeMfundo eziLawulayo kwi-Yale School of Management zizinkqubo zokubhalisa ezivulekileyo ezibeka abafundi kwigumbi elinamalungu e-Yale asebenzayo ayenamalungu kwiindawo zabo. Iinkqubo zijolise kwiintlobo ezahlukeneyo zoshishino kunye nezihloko zolawulo kwaye ziyafumaneka kubo bobabini kunye neenkampani kulo nyaka. Iinkqubo eziqhelekileyo ziyafumaneka kwaye zinokulungiswa kwiimfuno zenkampani nganye. Zonke iiprogram zeMfundo eziPhezulu kwi-Yale School of Management zibandakanya ikharityhulam edibeneyo yokunceda abafundi bafunde izinto ezisisiseko kwaye bafumane imbonakalo enkulu yemifanekiso.
Indlela yokubuyisela i-GMAT inokukunceda
Usetyenziso lweeFowuni ezisebenzayo kubafundi be-MBA
Isikhokelo somvuzo we-MBA kwi-Majors Majors
Oko Okufuneka Ukwazi Ngezicelo zokugqibela ze-MBA
IiNkqubo zeeShishini zeHaas kunye neeNkqubo zokuBamkela
Zingakanani iindleko ze-MBA zokufaka iindleko zokufaka isicelo?
6 MBA Iingxoxo Zongxoxo Zokuphepha
Yintoni Ubuninzi beGenus?
Ngaba kufuneka ndifumane ii-Brakes okanye ii-Rim Brakes?
Iingoma ezingama-60 eziphezulu zeGitarre yama-Acoustic
Ubomi basendulo kwiNtshonalanga yeSahara
Iikholeji zoLuthando lwaBhantshi
Abaqulunqi abaPhambili beSizwe
'Imibuzo Yeengxoxo kunye neeMice neBantu.'
Iinjongo ze-IEP zokuxhasa ukuguqulwa kokuziphatha
IYunivesithi yaseMaine i-GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data